DAAWO:Tirada Suxufiyiinta Caalamka Lagu Dilay Sannadkii Hore Iyagoo Waajibaadkooda Shaqo Gudanaya. |
DAAWO:Tirada Suxufiyiinta Caalamka Lagu Dilay Sannadkii Hore Iyagoo Waajibaadkooda Shaqo Gudanaya.
Europe(GNN)-Warbixin si rasmi ah loo faafiyey , ayaa lagu sheegay in laga soo bilaabo 1992-kii ay caalamka ku dhinteen suxufiyiin tiradoodu dhan tahay 1,122 (kun, boqol, laba iyo labaatan suxufi), iyagoo ku jira shaqadooda amma gudahanaya waajibaadkooda maalinlaha ee ay faraysay mihnadooda saxafinimo.
Sida xogtu sheegtay 23 sannadood ee la soo dhaafay ku dhawaad hal suxufi ayaa toddobaad kasta geeriyooda, sida ay sheegayaan xogo xisaabeedka laga helayo, waxa kale oo muhiimadu tahay in la ogaado asbaabaha dhiirigeliya in suxufiyiinta la dilo.
Arrinta koowaad ee dhiirigelisa in si sahal ah suxufiyiinta loo laayo ayaa ah in dadka dila aanay ka cabsan amma ka welwelin in gacanta lagu dhigo. Macluumaadka lag a helay waxay muujinayaan in 740 ka mid ah 1122 suxufi ee 23 sanno ee u dambeeyey ay geeriyooday in 90% aan ilaa hadda gacanta lagu dhigin ciddii dishay amma laamaha ammaanku aanay xallin ba, sababtoo ah dadka bartilmaameedsada suxufiyiinta amma weriyayaasha oo 660 ka badan ilaa hadda waxay dunida guudkeeda ku joogaan si xor ah oo cabsi la’aan ah.
Xogtan oo ay soo saareen Ururka difaacida saxaafadda ee CPJ (Committee to Protect Journalist) oo xaruntiisu tahay magaalada New York ee dalka Maraykanka, taas oo Wargeyska Jamhuuriya u beddelay luuqadda Soomaaliga, waxa ka mid ah waxyaabaha xogtoodu muujisay macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan sawirrada suxufiyiinta la laayey, shaqooyinkay ay hayeen, deegaanka ay ka hawlgalayeen iyo dadka dilay cidda loo malaynayo in ay tahay ama sidoo kale cidda loo tuhsan yahay inay suxufiyiintaas khaarajiyeen.
Waxa sidoo kale ku jira in suxufiyiinta geeriyooday ay u dhinteen xannuuno ay qabeen sida wadno xannuun amma qaar kale oo khatar ah iyo sida ay u noolaayeen markii ugu dambaysay, sidaa darteed waxay xogtan qaydhin u baahatay in baadhitaan dheeraad ah la sii sameeyo si waqti waqtiyada ka mid ah loo helo saxaafad ilaashan iyo waliba waxay iftiimisay cidda nacaybka badan u haysa weriyayaasha ee weerarka ba’an ku qaada.
Haddaba, suxufiyiinta geeriyooday laga soo bilaabo sannadkii 1992-kii waxa 87% ka mid ah oo noqonaya 976 ahaayeen suxufiyiin maxali ah, waxaanna waddamada ugu darran ee lagu laayo yihiin Ciraaq oo laga bilaabo 1992 lagu dilay 166 suxufi, Suuriya oo 80 qudha lagaga jaray, Soomaaliya oo 56 lagu dilay iyo Mexico oo 32 suxufi lagu laayey.
Xogtan waxa kale oo ay iftiimisay in suxufiyiinta maxaliga ah tababarku ku yar yihiin, dhaqaale ahaana aanay isku filnayn, taageero ku filana aanay cid ka helin, taasina ay keento in ay u nuglaadaan khatarta, goobaha ay u shaqeeyaana aanay daryeelin.
Khilafaadka iyo dagaalada ayaa ka mid ah waxyaabaha ka qaybqaata dilka suxufiyiinta, taasoo aan suxufiyiintu helin waxyaabaha ay isku difaaci lahaayeen, waxaana muddadaas 23 sanno ah ku geeriyoday in ka badan 426 suxufi iyagoo goobo dagaal ka soo waramaya amma warbixino ka soo tebinaya, halka 224 ku dhinteen goobo xabbad la is waydaarsanayo. In ka badan 146 suxufi waxa la dilay iyagoo ku gudo jira hawlmaalmeed amma shaqo khatar badan oo loo diray.
Xog-xisaabeed ay baahisay xarunta la yidhaa WAN-IFRA ayaa sheegtay in 51% suxufiyiinta dhintay wixii ka dambeeyey sannadkii 1992 ay ka mid ahaayeen warbaahinta daabacaadda sida wargeysyada ama joornaalada.
Warbixintan waxa daabacay Andrew Heslop oo ah Agaasimaha Xorriyadda Saxaafadda ee Ururka Wargeysyada iyo War-qorayaasha Caalamka ee WAN-IFRA.
Dhinaca kale, hay’adda u doodda xuquuqda saxaafadda iyo weriyeyaasha aan xuduudka lahayn ee marka la soo gaabiyo magacooda loo yaqan RSF, ayaa warbixin ay soo saareen kaga hadlay dalalka ay ku nool yihiin suxufiyiinta ugu xorriyadda badan iyo waddamadda lagu cabudhiyo saxaafadda.
Warbixintan oo lagu beegay 3 bisha May oo ku beegnayd Axaddii shalay oo guud ahaan caalamka laga xusay maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda oo dalalka ku bahoobay Qarammada Midoobay xusaan tan iyo 1993kii si loo taageero, looguna dabbaal-dego mabaa’diida aasaasiga ah ee xorriyadda saxaafadda.
Qarammada Midoobay, ayaa sheegtay in maalintan sidoo kale tahay munaasabad lagu ogeysiinayo muwaaddiniinta caalamka xadgudubyada ka dhanka ah saxaafadda xorta ee dunida ka dhaca.
Haddaba, tusmada rikoodhka maalinta xorriyadda saxaafadda ee caalamiga ah ee sannadkan 2015, ayaa lagu iftiimiyey saameynta colaaduhu ku yeesheen xorriyatul-qowlka.
Hey’adda u doodda xuquuqda saxaafadda iyo weriyeyaasha aan xuduudda laheyn ee marka la soo gaabiyo la yidhaa RSF oo qormadan soo saartay, ayaa sheegtay in handadaad iyo halista lagu hayo xorriyadda saxaafadda dunida oo dhan ay yihiin kuwo ka sii daraya.
Liiska xorriyadda saxaafadda ee dunida waxa meesha ugu sarraysa ka galay sannadkii shanaad oo xidhiidh ah dalka Finland.
Laba dal oo kale oo iyagana ka tirsan waddmada Scandinavianka – oo kala ah Norway iyo Denmark – ayaa ku xiga Finland.
Xagga hoose waxa liska kaga jira – Turkmenistan, Kuuriyada Woqooyi iyo Eritrea oo kaalinta ugu hoosaysa kaga jirta liiskan oo 180 waddan ku jiraan.
Mareykanka ayaa liiskan kaga jira booska 49aad, iyadoo waddanka Ingiriisku ku jiro kaalinta 34aad, halka Japan kaalinta 61aad ku jirto.
Sidoo kale, waxa halka hoose ee liiskan ku jira dalalka Afghanistan, Zimbabwe, Cuba, Shiinaha iyo Soomaaliya.
Waxaanna warbixinya si gaar ah loogu xusay in Soomaaliya sannad walba laga soo weriyo warbaahin lagu qasbo inay wax faaf reebaan, la ganaaxo, shaqadooda la hakiyo amaba la xidho, iyadoo weriyeyaal, tifaftirayaal iyo dad wax daabaca la dhibaateeyo, la weeraro, la xidh-xidho, qaarkoodna la dilo.